Omeo lalindalina ny taratasinao ao amin'ny Illustrator nefa aza miverina amin'ny 3D | Famoronana an-tserasera
Omeo miaraka amin'ny Illustrator ny halalin'ny taratasinao
Rodrigo Santiago | | sary
Ny taratasy miaraka amin'ny Illustrator dia ahafahantsika mamorona karazan-dahatsoratra vita amin'ny vector, miaraka amin'ny tombony azo amin'ny fampifanarahana ny salantsalany sy ny habeny tadiavintsika avy eo. Na izany aza, tena mora ny mianjera amin'ny programa toy izany amin'ny fomba fisaka, tsotra ary tsy manana toetra manokana. Ny fanomezana ny taratasinao fijery be pitsiny kokoa dia mety ho tsotra toy ny manampy ny halalin'ny volanao.
Raha tsy mizotra amin'ny programa 3D ianao, dingana vitsivitsy vitsivitsy ao amin'ny Illustrator dia ahafahanao mamorona tarehimarika lalindalina ahafahanao mampiavaka ny volavolanao. Ka eritrereto hoe manana ny endritsoratra fototra isika, ohatra, litera tokana.
Raha te hanampy ny halalin'ny taratasintsika amin'ny Illustrator isika ary hanangana fomba fijery dia tsy maintsy averina in-2 ity taratasy voalohany ity.
Aorian'izay, afindra ny litera farany satria eo amin'ny filaharana sosona amin'ilay lalana tianao hamoronana ny fomba fijery izy ireo.
Ankehitriny tsy maintsy miditra amin'ny litera penultima sy farany ianao amin'ny alàlan'ny fusion izay, tsara kokoa ny mametraka ny masontsivana ny fusion alohan'ny (Safidy / mifangaro / mifangaro safidy) ary mametraha dingana manokana hisorohana ny fandefasana be loatra ny karatra sary.
Tsy maintsy misafidy ny litera farany sy farany isika ary mamorona ny merge (Object / Fusion / Mamorona).
Mba hanavahana ny fiantraikan'ny fomba fijery noforonina avy eo amin'ny tarehin-tarehin'ilay taratasy, tsara kokoa ny manamaizina ny lokon'ireo kopia roa natambatra ireo. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy miditra amin'ny fusion amin'ny takelaka fisosana ianao, safidio ny roa ary ovao, raha ny zava-misy dia ny lokon'ny fikorotanana.
Ary farany, raha te-hilalao bebe kokoa an'ity vokatra ity isika, dia afaka manome loko roa samy hafa ireo kopia roa amin'ilay taratasy natambatra ary hamorona vokany manjavona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » sary » Omeo miaraka amin'ny Illustrator ny halalin'ny taratasinao